China China DDI (Dimeryl Diisocyanate) ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | YANXA
Metal Powder na Alloyed ntụ ntụ
Ngwaahịa ： Dimeryl diisocyanate（DDI 1410） CAS Mba. 68239-06-5
Molekụla usoro ： C36H66N2O2 EINECS ： 269-419-6
Na-ejikwa na Nchekwa Idozi: BTARTA KWESTARTA TALỌ KWESIGHTR W KWES NOTR W MGBE MERE. ORElọ ahịa na ebe akọrọ.
Dimeryl diisocyanate (DDI) bụ ihe pụrụ iche aliphatic (dimer fatty acid diisocyanate) diisocyanate nke enwere ike iji ya mee ihe na ogige nwere hydrogen na-arụ ọrụ iji kwadebe obere ihe dị ala ma ọ bụ ndị pụrụ iche polymer.
DDI bu ihe ndi ozo nke nwere otutu ihe na acho acho 36 carbon carbon. Ọkpụkpụ azụ a na-enye DDI mgbanwe kachasị mma, nguzogide mmiri na obere nsị karịa ndị ọzọ aliphatic isocyanates.
DDI bụ mmiri viscosity dị ala nke na-adị mfe soluble n'ọtụtụ polar ma ọ bụ nonpolar solvents.
chlorine na-ekpo ọkụ,%
1) niile oru data gosiri n'elu bụ maka gị akwụkwọ.
2) nkọwapụta ọzọ bụ nnabata maka inwekwu mkparịta ụka.
Enwere ike iji DDI mee ihe na rọketi siri ike, mmecha akwa, akwụkwọ, akpụkpọ anụ na akwa ọgwụ, ọgwụgwọ nchekwa osisi, ikpo ọkụ eletriki na nkwadebe nke ihe pụrụ iche nke polyurethane (urea) elastomers, nrapado na sealant, wdg.
DDI nwere akụrụngwa nke obere nsị, enweghị ụcha, gbazee n'ọtụtụ ihe ndị mebiri emebi, obere mmiri na obere viscosity.
Na industrylọ ọrụ Fabric, DDI na-egosi atụmanya ngwa ngwa dị mma na mmiri na-asọ oyi na ngwongwo dị nro na akwa. Ọ bụ ihe na-erughị ala na mmiri karịa aromatic isocyanates ma nwee ike iji kwadebe anụ mmiri emulsions. DDI nwere ike melite nsonaazụ mmiri na nke na-egbu mmanụ maka akwa fluorinated. Mgbe ejiri ya mee ihe, DDI nwere ike meziwanye ihe na-eme ka mmiri na mmanụ na-adịghị mma nke akwa.
DDI, nke edobere site na acid buru ibu, bụ ụdị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị iche iche, nke nwere ike imeghari isocyanate. E jiri ya tụnyere mbara igwe isDI, TDI, MDI, HDI na IPDI, DDI anaghị egbu egbu ma ọ bụ adịghị akpali akpali.
Ijikwa: Zere ịkpọtụrụ mmiri. Gbaa mbọ hụ na ezigbo ikuku ikuku na ebe ọrụ.
Nchekwa: Na-echekwa n'ime ihe mechiri emechi nke mechiri emechi, dị jụụ ma kpọọ nkụ.
Ozi ebugharị: anaghị achịkwa ya dị ka ihe egwu.
Nke gara aga: Potassium na ịkpụcha ahịhịa
Osote: Sodium Perchlorate
Amooniyaji Oxalate Monohydrate
Amium Nitrate Phase kwụsiri ike
YANXA (HK) INTERNATIONAL ụlọ ọrụ CO., LTD.